यी कुकुरहरू हाम्रो नजिक हुनुहुन्छ। प्यारा र धेरै, खराब र अविश्वसनीय दयालु, पनि जुनसुकै र पूर्ण रूपमा बेहोश। तिनीहरू सबै धेरै फरक छन्, तिनीहरू एक नाम मात्र हुन्छन् - एक mongrel। एक कुत्ते को एक अनुशासित छैन, जसमा विभिन्न रक्तचापको घृणा गरिन्छ, एक व्यक्तिको एक विश्वासी र समर्पित मित्र बन्नेछैन जुन कहिलेकाहीँ उनीहरु संगै बेहोशपूर्वक व्यवहार गर्दछ।
आफैलाई पशु प्रेमीको रूपमा राख्ने मानिसहरूको पक्षमा यस्तो मनोवृत्ति हो, उनीहरूको अनुसरण गरिएको चार-लिङ्ग मित्रको हेरचाह, र "पासपोर्ट" बिना कुत्ता अपमान गर्न सक्दछ।
प्रजनन गर्न र कुकुरहरू बढाउने विशेषज्ञहरू , प्रायः एक राम्रो शिक्षाको साथ एक mongrel को सट्टा एक मित्र स्थापित गर्न सिफारिस गर्दछ। र, यसको बावजूद, हामीमध्ये धेरै गर्व गर्नाले हाम्रो मनपर्छ "आंगन" ले।
यो के हो, मंगलबार?
के तपाईं प्रजातिको कुन प्रतिनिधि पौराणिक कुकुर कस्मेटन Belka र Strelka थिए? अनि चेखोको कथा कश्कंकाको प्रसिद्ध नायिका? दुवै अवस्थामा (र यो सूची अनिश्चितकाल जारी राख्न सकिन्छ), तिनीहरू मंगोल थिए। कुखुराको चित्र जो ब्रह्माण्डीय दूरीबाट नहटाइएको कुकुरहरु को चित्रहरु लाई दुनिया भर मा फेंक दिए, र कास्काका भाग्यले पृथ्वी को विभिन्न भागहरु मा लाखों दिलहरुलाई छुआयो।
तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ, एक नस्ल को अभाव सधैं गम्भीर खतरा बुझ्न सक्दैन। यो धेरै भाइहरूलाई को प्रतिलिपि भनिँदैन, किनकि यो कुत्तों को एक पुरा तरिकाले प्रजाति हो। मङ्गलबार चालाक र उहाँको मालिकको समर्पित छ।
उनीहरूको पांडुलिपि जनजातिहरूको विपरीत, यी जनावरहरू विभिन्न रोगहरूलाई कम संवेदनशील हुन्छन्। Mongrel एक कुत्ता हो जुन सजिलै हवाइको तापमान र अन्य मौसम परिवर्तनहरूमा परिवर्तनहरू सहन सक्छ। प्रकृति अनुसार, यी जनावरहरू राम्रो स्वास्थ्यको साथमा छन्। यो तथ्य द्वारा व्याख्या गर्न सकिन्छ कि विभिन्न प्रजातिहरु को रगत उनको रक्सीहरुमा फैलन्छ। साथै, सडकमा त्यहाँ एउटा प्राकृतिक प्राकृतिक चयन छ।
पेडीगुरी जनावरहरू प्रायजसो अफ्रिकाको फल हो (निकटवर्ती सम्बन्धी क्रसिङ), जसले तिनीहरूको स्वास्थ्यलाई असर गर्न सक्दैनन्। र जीनसबाट चार-टाढा "स्ट्रीट बच्चा" जीनसलाई स्वस्थ बनाइन्छ।
प्रायः, सिन्गोलोजिस्ट भन्छन् कि मङ्गेलले एक कुत्ता भनेको धेरै सदस्यहरूको प्रतिनिधिका लागि यसको सदस्यहरूलाई प्रदर्शनमा महत्त्वपूर्ण कमजोरी छ (धेरै तेज चिन्ता वा अनुशासन हो)। यद्यपि, "आंगन" ले आफूलाई सेवा जनावरको रूपमा प्रमाणित गरेको छ। उदाहरणको लागि, यो एक विश्वसनीय सुरक्षा गार्ड, अधिक प्रसिद्ध भाइहरू लाई कम से कम छ। आफ्नो मालिक को रक्षा गर्न को लागी या उनको लागि सौंपने क्षेत्र को रक्षा को क्षमता मा, mongrel कुत्तों सेवा कुत्तों को कम से कम छ, तर यस सूचक मा बक्सेर र कोलो भन्दा राम्रो हो।
चतुरता अनुसार, यो कुकुरहरू बराबर छैनन्। 84% मालिकहरूले दाबी गरे कि उनीहरूको पाहुना धेरै चाँडै छन्, तुरुन्त स्थितिको आकलन गर्नुहोस्, तुरुन्तै निर्णय गर्ने निर्णय गर्नुहोस्।
Dornorna एक कुत्ता हो, यसको आजादी को माध्यम ले, केवल कोकेशियान गोठालो को लागि दोस्रो छ , अन्य राम्रो तरिकाले जनावरहरु को पछि छोड दिए। Dornornagi धेरै चाँडै घर मा व्यवहार को नियमहरु सिक्न सक्षम थिए। यसमा तिनीहरू Risenschnauzer र कोकेशियान शेफर्ड कुत्ता मात्र हो।
अर्को लाभ जो mongrel को धेरै नस्ल देखि अलग छ। एक कुकुर बिना पेट मा एक विशेष आहार को आवश्यकता छैन, जो एक नियम को रूप मा, धेरै धन को आवश्यकता हो। तपाईंको mongrel मित्र खुसी हुनेछ, मासु को थप संग मासु भाइरस मा दिन को दोपहर दुई पल्ट प्राप्त हुनेछ।
यी पूर्णतया गैर-प्राणी प्राणीहरू छन्, सानो स्थानको लागि नयाँ स्थानको निवास, जस्तै, र कुनैपनि स्थितिमा प्रयोग गर्न सक्षम छन्। एक mongrel बाँच्न सक्दैन। कुक मालिकको परिवर्तन (परिवर्तन) पीडित हुनेछैन। यी जनावरहरू धेरै व्यक्तिसँग संलग्न छन् - उनीहरूका सबै घातक आत्मा, एकपटक र सबैका लागि।
बौद्धहरू धेरै सजिलो छन्। यसमा तिनीहरू पूर्वी युरोपियन शेफर्ड भन्दा अगाडि छन् । तिनीहरू Risenschnauzer, Rottweiler, र गोठाला भन्दा धेरै रमाइलो र प्लेलिङ्ग हो। यसको अतिरिक्त, यी धेरै मायालु पाहुनाहरू छन्।
विशेषज्ञहरूले जान्दछन् कि गलत तरिकाले चयन गरिएको उपनाम जनावर र यसको मालिकलाई समस्या ल्याउन सक्छ। कुकुर-मङ्ग्रेलहरूको नाम, नियमको रूपमा, मौलिकतामा फरक छैन। तर हामी तपाईंलाई सुझाव दिन्छौं, तपाइँलाई कसैले कसरी आफ्नो मित्रलाई फोन गर्नु, पिल्ला कसरी व्यवहार गर्दछ भनेर हेर्नुहोस्। सायद तपाईंले केही सुविधाहरू ध्यान दिनुहुनेछ कि उनको नाममा प्रतिबिम्बित हुन सक्छ। सबै पछि, यो बिल्कुल आवश्यक छैन कि बच्चाले बिखरे र असाधारण नाम (बीटल, बारबासा वा बल) पहन्दछ।
यदि तपाईं एक दयालु र गर्व कुकुर हुनुहुन्छ भने, किन उसलाई बरुन वा प्रभुलाई बोलाउँदैन। विस्फोटक चरित्रको साथमा एक कुकुरले वुल्कन नाम राख्दछ, र छिटो र अनावश्यक कुकुरलाई खुसीसाथ रकेट वा कम्युनिस्टको नाममा प्रतिक्रिया दिनेछ।
सुत्केरी आँखों संग एक पिल्ला एक राम्रो र हवेली नाम को अधिकार छ। आफ्नो कुत्ते को लागि एक सुंदर उपनाम छान्नुहोस्, यस तथ्य को बावजूद यो mongrel छ। आखिर, तपाईंको नयाँ चार-लिङ्ग मित्र मित्र तिम्रो घरमा एक वर्षको लागि आई। उहाँ तिम्रो साथ जिउनुहुनेछ, आफ्नो सम्पत्तिको रक्षा गर्नुहोस् र तपाईंको आगमनमा ईमानदार भई आनन्दित हुनुहुन्छ।
प्रशिक्षणको विभिन्न तरिकाहरूको क्षमता र आत्मविश्वासको अनुसार, चौथो स्थान पूर्वी युरोपियन गोठाला कुकुर, डोबरम्यान र कोली पछि, mongrel द्वारा कब्जा गरिएको छ। हामीले पहिले नै भन्यौ कि यी जनावरहरू अत्यन्त स्मार्ट हो, सजिलै मालिकको मूडलाई पकडाउँछन्, र उसले के चाहियो भनेर बुझ्दछन्।
यो भन्नको लागि सुरक्षित छ, प्रशिक्षणमा स्थिरता देखाउदै, निरन्तरता र धैर्य देखाउदै, धीरे-धीरे तपाईं आफ्नो मित्रलाई एक महान र शिक्षित कुत्तामा परिणत गर्न सक्षम हुनुहुनेछ।
कसरी कुकुर mongrel प्रशिक्षित गर्ने? यो प्रश्न सबैको लागि उपयुक्त छ जसले उनको घर सानो, अक्सर डरलाग्दो, भोटेको र चिसो पिल्ला ल्याईयो। पहिला तिनले घरको व्यवहारको प्राथमिक नियमहरू सिक्नुपर्छ। एक कुकुर आराम र खानेको लागि नियमित स्थान हुनुपर्छ। पिल्ला धेरै चाँडै उनको नाम सम्झाउनेछ र यसलाई प्रतिक्रिया दिनेछ।
त्यस पछि, तपाईंले उहाँलाई सरल सरल आदेशहरू सिकाउनुपर्छ, जुन "बैठ", "फू", "म" समावेश गर्दछ। यदि पेगिगेरी जनावरहरूसँग पेगुरी जनावरहरू बिना के गर्न गाह्रो छ भने "सर्वोच्चमान" सँग स्वतन्त्र अध्ययनहरू धेरै फलदायी हुन्छन्।
Mongrel को लाभ र नोकसान
ठूला ठूला पिडाहरूको उपस्थिति र व्यवहारमा विभिन्न परिवर्तनहरू म्याग्रेले भन्दा कम उमेरको तुलनामा अधिक अनुमानित छ
गैर-पेनिग्रिङ कुकुरसँग राम्रो स्वास्थ्य र एक लामो जीवनको आशा छ।
बौद्धहरूको उत्कृष्ट प्रजनन विशेषताहरू छन्।
अन्त मा, म नोट गर्न चाहन्छु कि एक नस्ल बिना कुत्ते को विचार एक मुख्य लाभ छ: तपाईंको "परिवार को घर" लाई आफ्नो परिवार मा ल्याएर, तपाईं केवल एक वफादारी र वफादार मित्र न केवल एक राम्रो, राम्रो काम गर्छन। निस्सन्देह, प्रिय र राम्ररी पिल्लाहरू चाँडै स्वामीहरू खोज्छन् र सडकको बाहिरबाट बाहिर निस्कने बच्चा र तपाईले न्यानो पार्छ, वास्तवमा तपाईको हेरविचार र प्रेमको आवश्यकता पर्दछ।
मेन कोन्स को लागि सर्वश्रेष्ठ फीड: एक पशु चिकित्सक देखि सल्लाह। माइन कोनलाई के खाने?
पहिले CSS - मूल, आरामदायक, व्यावहारिक
नायलन कृत्रिम अंग: समीक्षा
तीव्र नाडी: यसको घटना को कारण
इटालियन वस्त्र ब्रान्ड। ब्रान्ड छोराछोरीको वस्त्र